सुवास नेम्वाङलाई नारायणकाजीकाे प्रश्न : कमरेड, तपाईं कसरी सुत्न सक्नुभएकाे हाेला ?
काठमाडौं। नेकपा प्रचण्ड-माधव पक्षका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानले संसद बिघटनको परिकल्पना नगरेको बताएका छन्।
शुक्रबार बबरमहलमा नेकपाको पेशागत विशेष जिल्ला कमिटीको प्रशिक्षणमा बोल्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‛हिजो हामीले राजनीतिक सहमतिमै त्यो व्यवस्था गरेका हौं। संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई प्रश्न गरे कमरेड संविधान मार्दा तपाईं कसरी सुत्नुभएको होला ?’
प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‛कमरेड तपाईहरुले पढ्नुभएकै छैन। संसद बिघटन गर्ने व्यवस्था कहिँकतै छैन। यस्तो असंवैधानिक कदमको समर्थन कसरी गर्नुहुन्छ ? भोलि जनतामा कसरी मुख देखाउनुहुन्छ ? तपाईहरुको मन भतभती पोल्दैन ?’
निर्वाचन आयोगले कानूनमा टेकेर फैसला गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे। ४४१ जनाको कमिटीमध्ये १०० जना बसेर १२०० को कमिटी बनाउन कसरी मिल्छ ? सेटिङ भन्ने कुरा भ्रम हो। त्यो सम्भव छैन, प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।
संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकट राजनीतिक सहयोगी हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय लिएपनि नेम्वाङले ‘त्यो गलत भएको’ सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन्।
सविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ संसद बिघटनको विषय अदालतमा विचाराधिन विषय भन्दै उनी पन्छने गरेका छन्। नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको विषय गत २०७६ साल साउन ४ गते पत्रकारहरुलाई प्रशिक्षण दिदाँ समेत उल्लेख गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्रीले ‘संसद विघटन गर्न सक्तैन’ भनेका थिए।
Tagsनारायणकाजी श्रेष्ठ नेकपा